तीनजनाको लोभलाग्दो मित्रता : यो पो हो त आत्मीयता ! - Purbeli News
तीनजनाको लोभलाग्दो मित्रता : यो पो हो त आत्मीयता !
प्रकाशित मिति: मंगलबार, आश्विन १०, २०७४ समय: १३:०५:३२
कुनै पनि प्रतिस्पर्धामा प्रायः वैमनश्य हुन्छ । ईर्ष्या अनि डाह हुन्छ । तर, नेपाल आइडलको फाइनलमा पुगेका बुद्ध लामा, निशान भट्टराई र प्रताप दास एकअर्कामा दुःखसुख साटासाट गर्छन् । सँगै हाँस्न अनि रमाउन चाहन्छन् । कतारबाट नेपाल फर्केका उनीहरू अहिले पनि एकअर्कासँग छुट्टिन चाहिरहेका छैनन् ।
उनीहरूको आत्मीयता देख्दा लाग्छ, प्रतियोगिताको जितहार हुन बाँकी नै छ । अर्थात्, विजेता, फस्ट रनरअप र सेकेन्ड रनरअप भएको अनुभूति उनीहरूमा खासै देखिँदैन ।नेपाल आइडलको फाइनलपछि पहिलोपटक अन्नपूर्ण पोस्ट्सँग कुराकानी गर्दै तीनैजनाले आआफ्नो अनुभूति साटेका छन् ।, ‘लगभग चार महिना सँगै बस्यौं । हामीबीच हरेक कुरा सेयर हुन्थ्यो’, नेपाल आइडल विजेता बुद्ध लामा भन्छन्, ‘अहिले पनि हाम्रो आत्मीयता उस्तै छ । हामी प्रतिस्पर्धी हौं भन्ने कहिल्यै लागेन ।’
लगभग पाँच महिनाअघि नेपाल आइडलको अडिसन हुँदा तीनैजना सामान्य व्यक्ति थिए । परिवार, आफन्त अनि छरछिमेकमा सीमित उनीहरूको परिचय अहिले सात समुद्र पारिसम्म फैलिएको छ । नेपाल आइडलको फाइनलमा पुगेपछि उनीहरूको शान र मानको आकलन नौ करोड ३१ लाख ८३ हजार तीन सय ३५ भोट, फाइनलका लागि कतारमा ओइरिएका हजारौं दर्शक अनि उनीहरूलाई स्वागत गर्न त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पुगेका हजारौंको भीडबाट सजिलै गर्न सकिन्छ ।
नेपालमा पहिलोपटक भित्र्याइएको अन्तर्राष्ट्रिय फ्रेन्चचाइज सेरिज आइडलको नेपाली संस्करणले नेपाली टेलिभिजनमा क्रान्ति ल्याएको बताउनेहरूको कमी छैन । यति भव्य प्रतियोगिताको फाइनलमा पुगेका तीन युवाबीचको प्रतिस्पर्धा निकै रोमाञ्चक रह्यो । प्रतियोगिताका फस्ट रनरअप निशान भट्टराईको अनुभूति पनि त्यस्तै छ ।
‘प्रतिस्पर्धा भनेपछि हामीमात्रै होइन, अडिसनमा सहभागी हुनेहरूको समेत चाहना जित नै हुन्छ’, निशानले भने, ‘तर हामी कसरी राम्रो प्रस्तुति दिने भनेर एकअर्कामा सल्लाह गथ्र्यौं । कोही बाहिरिँदा नमीठो लाग्थ्यो । फाइनलपछि पनि हामीबीचको आत्मीयता उस्तै छ ।’ नेपाल आइडलजस्तो प्रतिष्ठित प्रतियोगितामा फस्ट रनरअप हुनु गौरवको विषय भएको निशानको भनाइ छ । ‘मैले जुन पोजिसन हासिल गरेँ, त्यसमा खुसी र सन्तुष्ट छु ।’
नेपाल आइडल विजेता बुद्धलाई भाइ भनेर सम्बोधन गर्छन् सेकेन्ड रनरअप प्रताप दास । बुद्ध पनि मायाले प्रताप दाइ भन्छन् । बुद्ध र निशानबीचको मित्रता देख्दा लाग्छ, उनीहरू प्रतिस्पर्धी नभई सहोदर दाजुभाइ हुन् । ‘प्रतियोगिता सकियो तर हाम्रो यात्रा जारी छ’, प्रतापले भने, ‘यतिका समय सँगै बसेर बिताएका क्षणहरू स्मरणीय छन् । हामी अब अलग हुनु परे पनि एकअर्कालाई जरुर मिस गर्छौं ।’ अाजकाे अन्नपूर्ण पाेस्टमा खबर रहेकाे छ ।